'Ọhụụ' nke President Trump 'maka Mideast Peace
Home » Na-agbasa News Travel » 'Ọhụụ' nke President Trump 'maka Mideast Peace
Ọ bụ ezie na Israel anabatala mkparịta ụka na-adabere na usoro ihe omume ahụ, ndị Palestian Authority ajụla usoro a
Onye isi ala US Donald Trump na Tuesday kpughere atụmatụ udo udo nke Middle East na-egbu oge, nke na-ele anya na Israel na-akwado ọbụbụeze na Jeruselem a na-ekewaghị ekewa na itinye ya na nnukwu swaths nke West Bank. Atụmatụ a, ka ọ na-akpọ oku ka eke ala Palestian nwere onwe ya, na-eme ka ọdachi a dakwasịrị nnupụisi nke Hamas, nke na-achị Gaza, na nnabata Israel dị ka mba ndị Juu.
Onye isi ala Trump, onye onye nlekọta Israel Prime Minister Binyamin Netanyahu, toro atụmatụ ahụ dị ka "atụmatụ kachasị njọ, ezi uche na nkọwa zuru ezu egosipụtagoro, nke nwere ike ime ka ndị Israel, Palestinians na mpaghara ahụ nwee nchebe ma nwee ọganihu."
Ọ kwenyere na "taa Israel na-ewere nnukwu ihe maka udo," ebe ọ na-ekwusi ike na "udo chọrọ nkwekọ mana anyị agaghị ekwe ma ọlị ka e nwee nchebe Israel."
Ka enwere mmekọrịta na Palestine Authority, Onye isi ala Trump gbatịpụrụ ngalaba oliv, na-egosipụta mwute maka echiche ya na ndị Palestian "nọ n'ime ọgba aghara ogologo oge." Agbanyeghị na ịkatọ PA ugboro ugboro maka atụmatụ ndị isi ya ahụbeghị, Onye isi ala Trump siri ọnwụ na nnukwu akwụkwọ ahụ nyere "ohere mmeri" nke nyere "ezigbo ụzọ nyocha" maka ịkwụsị esemokwu ahụ.
N'akụkụ a, atụmatụ ahụ n'onwe ya na-achọ "mmezi nke ọrụ nchekwa Israel [na steeti Palestine ga-abịa n'ọdịnihu] na njikwa Israel nke ikuku ikuku n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Osimiri Jọdan."
Ihe ezi uche dị na ya, atụmatụ ahụ na-atụ aro, "ga-enye ndị Palestaịn ikike niile ịchị onwe ha mana ọ bụghị ike iyi ndị Israel egwu."
N'akụkụ nke ya, Netanyahu kwere nkwa na "ya na ndị Palestaịn ga-akparịta ụka n'udo dabere n'atụmatụ udo [Onye isi ala Trump] nwere." Nke a, agbanyeghị onye ndu Israel na-eche nnupụisi siri ike site n'aka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka nri ya bụ ndị na-ekwusi ike, na ụkpụrụ, echiche nke ọchịchị Palestine.
Netanyahu kwukwara, "[[Onye isi ala Trump] bụ onye ndu US mbụ na-amata mkpa mpaghara dị na Judia na Sameria [okwu Akwụkwọ Nsọ maka mpaghara gụnyere West Bank] dị mkpa maka nchekwa mba Izrel."
Kpọmkwem, o mere ka ọ pụta ìhè na atụmatụ udo ahụ chọrọ ka emesịa jiri ọbụbụeze Israel mee ihe na mpaghara niile nke ndị Juu na West Bank, yana usoro ndagwurugwu Jọdan, nke ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke nchekwa nke Israel na-ele anya dị ka ihe dị mkpa iji hụ na nchekwa obodo ogologo oge.
Udo atụmatụ onwe ya “na-eche echiche a Palestian ala na encompass ókè-ala ezi uche yiri na ókèala nke West Bank na Gaza tupu 1967.”
Nke ahụ bụ, tupu Israel weghara mpaghara ndị ahụ site na Jọdan na Ijipt, n'otu n'otu.
Netanyahu ahapụghị ohere maka nkọwa na-ekwupụta na ndị ụlọ omebe iwu ya ga-eme ntuli aka na Sọnde na njikọta mpaghara niile "atụmatụ udo ahụ kpọrọ dịka akụkụ nke Israel na nke United States kwetara ịnakwere dị ka akụkụ nke Israel."
Prime Minista Israel mesikwara ike na atụmatụ ahụ chọrọ ka a kwụsị nsogbu ndị gbara ọsọ ndụ Palestian na mpụga Israel, yana nkwupụta na "Jerusalem ga-anọgide na isi obodo Israel dị n'otu."
Ka o sina dị, atụmatụ udo ahụ dị ka isi obodo ọdịnihu nke steeti Palestine “ngalaba nke ọwụwa anyanwụ Jerusalem nke dị na mpaghara niile ọwụwa anyanwụ na mgbago ugwu nke ihe mgbochi nchebe dị ugbu a, gụnyere Kafr Aqab, akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Shuafat na Abu Dis, ma nwee ike ịkpọ aha Al Quds ma ọ bụ aha ọzọ dị ka State nke Palestine kpebiri.
N'ezie, atụmatụ a gụnyere map na-akọwapụta oke ala ga-adị n'etiti Israel na steeti Palestine. Ọ bụ ezie na Onye isi ala Trump kwere nkwa na mpaghara ndị ekenyela na PA ga-abụ "ndị na-emepebeghị emepe," na-egbochi Israel ịgbasawanye obodo ndị Juu dị na West Bank ma ọ dịkarịa ala afọ anọ, o ruru eru na "mmata [ga-adị] ngwa ngwa" karịa ebe ndị ahụ pụtara ka ị nọrọ n'okpuru nchịkwa Israel.
“Udo ekwesighi ka achupu ndi mmadu - Arab ma obu onye Juu - site na ulo ha,” atumatu udo kwuru, dika “owuwu di otua, nke nwere ike ibute ọgbaghara obodo, megidere echiche nke ibi ndu.
"Ihe dị ka 97% nke ndị Israel nọ na West Bank ga-esonye na mpaghara Israel na-asọ oyi," ka ọ gara n'ihu, "na ihe dịka 97% nke ndị Palestaịn na West Bank ga-esonye na mpaghara Palestine na-asọpụrụ."
N'ihe gbasara Gaza, US "Ọhụụ" na-enye ohere nke ikenye maka ndị Palestaịn Israel mpaghara dị nso na Gaza n'ime nke enwere ike rụọ ngwa ngwa iji lebara mkpa ndị mmadụ anya, na nke ga-emecha rụọ ụlọ nke obodo Palestine na-eme nke ọma. Obodo ga-enyere ndị Geza aka nke ọma. ”+
Atụmatụ udo ahụ chọrọ ka mweghachi nke ikike PA n'aka ọchịchị ndị Hamas na-achị.
Banyere akụkụ mpaghara, ma President Trump na Prime Minista Netanyahu na Tuesday gosipụtara mkpa ọbịbịa na White House nke ndị nnọchi anya si United Arab Emirates, Bahrain na Oman.
N'ezie, atụmatụ ahụ mere ka o doo anya na Trumpda Trump “kwenyere [s] na ọ bụrụ na ọtụtụ mba Alakụba na mba Arab na-eme mmekọrịta n'etiti Israel na ọ ga - enyere aka ịkwalite mkpebi ziri ezi na nke ziri ezi maka esemokwu dị n'etiti ndị Israel na ndị Palestaịn, ma gbochie ndị na - eme ihe ike iji ọgba aghara a imebi mpaghara a. ”
Ọzọkwa, atụmatụ ahụ chọrọ ka e guzobe kọmitii nchebe mpaghara nke ga-enyocha atumatu iyi ọha egwu ma mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee ọgụgụ isi. Atụmatụ a kpọrọ ndị nnọchi anya Egypt, Jordan, Saudi Arabia na United Arab Emirates ka ha sonyere ndị otu Israel na Palestine.
Nnukwu enyí n'ime ụlọ ahụ tupu Tuesday bụ na ọ nweghị nnọchite anya Palestine na White House. Agbanyeghị, n'agbanyeghị arịrịọ ugboro ugboro na Onye isi ọchịchị Palestine Mahmoud Abbas, atụmatụ udo ahụ katọrọ ndị isi Palestian.
"Gaza na West Bank kewara ndọrọ ndọrọ ọchịchị," ka akwụkwọ ahụ na-ekwu. “Gaza na-agba ọsọ site na Hamas, nzukọ ụjọ nke chụpụrụ ọtụtụ puku rọketi n’Izrel ma gbuo ọtụtụ narị ụmụ Israel. Na West Bank, ndị ọchịchị Palestine site na ụlọ ọrụ dara ada na nrụrụ aka zuru oke. Iwu ya na-akwado iyi ọha egwu na ndị Palestian na-achịkwa mgbasa ozi na ụlọ akwụkwọ na-akwalite ọdịbendị nke iwe.
“Ọ bụ n’ihi enweghị nzaghachi na ọchịchị ọjọọ ka ọtụtụ ijeri dọla lara n’iyi na itinye ego n’enweghị ike ịgbata ebe ndị a iji nye ndị Palestaịn ohere. Ndị Palestaịn kwesịrị inwe ọdịnihu dị mma ma ọhụụ a nwere ike inyere ha aka iru ọdịnihu ahụ.
Tupu Tusde, ọtụtụ kwenyere na ọ ga-abụ nnukwu ọrụ iji mee ka ndị isi Palestian laghachi na tebụl mkparịta ụka. Ugbu a, yana oku nke PA na-akpọ maka ngagharị iwe na West Bank, ndị nyocha ekwuola na otu "Deal of the Century," dịka akpọrọ atụmatụ US, nwụrụ na mbata nke Ramallah.
Ka o sina dị, President Trump yiri ka ọ na-agwa ndị Palestine okwu ozugbo.
Ihe bu isi ihe o choro bu iweli $ 50 ijeri ego itinye ego - nke ga - ekewa n'etiti ndi PA na ochichi Arab mpaghara - nke a ga - eji nye ndi Palestia ohere aku na uba.
“Site n’ịzụlite ikike na nkwekọrịta nkwekọrịta, iwu nke iwu, usoro mgbochi nrụrụ aka, ahịa isi obodo, usoro ụtụ isi na-eto eto, na atụmatụ ọnụahịa dị ala na mbelata mgbochi azụmahịa, atụmatụ a na-ahụ anya mgbanwe mgbanwe amụma yana ntinye akụrụngwa nke ga- meziwanye usoro azụmahịa ma kpalite ọrụ ndị ọrụ onwe ha, ”atụmatụ udo na-ekwu.
"Hosplọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ụlọ ọrụ ga-echekwa nweta ntụkwasị obi ịnweta ọkụ eletrik dị mma, mmiri dị ọcha na ọrụ dijitalụ," ka ọ na-ekwe nkwa.
Atụmatụ "ọhụụ" nwere ike ịbawanye nke ọma site na otu paragraf mbụ nke iwebata ya, nke na-akpọ okwu nzuko omeiwu ikpeazụ nke praịm minista Israel mbubreyo Yitzhak Rabin, "onye bịanyere aka na Oslo Accords na onye 1995 nyere ndụ ya n'ihe kpatara ya nke udo.
“Ọ hụrụ Jerusalem ka ọ dịrị n’otu n’okpuru ọchịchị Israel, akụkụ nke West Bank nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ ndị Juu na ndagwurugwu Jọdan ka etinye ya na Israel, na ndị fọdụrụ nke West Bank, tinyere Gaza, na-edo onwe ha n'okpuru ọchịchị obodo Palestian n'ihe ọ kwuru ga - abụ ihe 'na-erughị ala.'
“Ọhụụ Rabin,” ka atụmatụ ahụ gara n'ihu, “bụ nke Knesset [ndị omeiwu Israel] kwadoro Iwu Oslo, ndị ndu Palestine ajụghịkwa ya n'oge ahụ.”
Na nkenke, US yiri ka ọ na-atụgharị ọhụụ ọhụụ gara aga na-enwe olileanya iwulite ọdịnihu ka mma, n'agbanyeghị na ọ ga-abụ n'ọdịnihu.
Enwere ike ilele ọdịnaya niile nke atụmatụ udo Ebe a.
Site n'aka Felice Friedson na Charles Bybelezer / The Media Line
2019 bụ afọ dị egwu maka Middle East & North Africa hotels
"Igimụrụ anya bụ isi": Solomon Islands na-eme ihe na Coronavirus